Mampihena tena amin’ny akondro, mahavery 3 kilao ao anaty herinandro
Mampihena tena amin’ny letisia
Efa manomboka hita eny an-tsena ny letisia.Voankazo vokatra indray mandeha isan-taona ihany izy ity ary voafetra dia voafetra ny fe-potoana ahitana azy eny an-tsena.
Regime Vary mena : Sady mihena no salama ny tosi-drà!
Foto-tsakafontsika malagasy ny vary ka sarotra ny hanilihina azy amin’ny sakafo hohanina. Ary maninona tokoa raha izy ity mihitsy no atao fototry ny regime fampihenan-tena atao?
Jus voankazo na legioma fotsiny hohanina dia mihena, tandremo anefa
Karazana fampihenan-tena azo atao koa ny tsy mihinana na tsy misotro ny marina kokoa afa-tsy ranom-boankazo na zava-pisotro vita amin’ny legioma.
Regime mampihena hatramin'ny 7 kilao
Dingana 3 no arahina ao anatin'ny régime hatolotra anao androany. Mpitsabo "nutritionniste" iray antsoina hoe : Dr Jacques Fricke no namolavola azy ity. Ireto avy ny tsara ho fantatra.
Mampihena 4 kilao ny vary, hena, …
\_Régime tsy hihinanana kaloria betsaka amin’ny alalan’ny fihinanana sakafo be gliosida ela vao levona ity atolotra anao ity.
Yaourt 6 isan’andro : Mampihena 5 kilao haingana be
Régime nafototra amin’ny fihinanana yaourt indray ity atolotra anao androany ity. Natao ho an’ny olona maniry hihena haingana izy ity satria mampihena hatrany amin’ny 5 kilao ao anatin’ny herinandro monja. Ireto avy ny tsara ho fantatra :
« Rééquilibrage alimentaire », ahoana no atao?
Teny malaza be amin’izao fotoana izao, ao anatin’ny sehatry ny fampihenan-tena ny fanaovana « rééquilibrage alimentaire » fa inona tokoa izany ? ary ahoana ny fanatanterahana azy ?
Be gliosida be ny akondro. Matetika izy no voarara ao anaty régime fampihenan-tena. Azo atao fototry ny régime fampihenan-tena kosa izy fa misy kosa ny fepetra arahina :
Fitsipiky ny régime
Kely dia kely ny kaloria entin’ny akondro. Be fibres anefa izy sady be vitamina koa. Ankoatra ireo dia misy singa antsoina hoe :“lipase” ao anatiny izay mandoro ny kaloria haingana be. Tsy tokony hampatavy mihitsy araka izany ny akondro. Ao anatin’ity régime ity kosa anefa dia misy ny fepetra tsy maintsy arahina raha tiana hahomby ny régime atao :
• Ny akondro no atao foto-tsakafo amin’ny sakafo maraina. Tsy mihinana zavatra hafa
• Misotro rano betsaka mandritra ny tontolo andro fa atao rano mitovy mari-pana amin’ny hafanana ety ivelany ihany .
• Tsy voafetra sady tsy voafaritra ny sakafo atoandro sy hariva. Tokony ho ferana kosa ny fatrany ary kendrena ho ara-pahasalamana izany. Arafeto ary kendreo ho be otrikaina. Tsara raha natoraly avokoa ny sakafo hohanina fa tsy dia ho be sakafo voahodina ara-indostrialy. Tsy maintsy alohan’ny amin’ny 8 ora alina ny sakafo farany.
• Tsy mahazo mihinana tsindrin-tsakafo hafa afa-tsy ny akondro ihany
Raha voahaja ireo fepetra rehetra ireo dia mety hahavery 2 ka hatramin’ny 3 kilao ao anatin’ny herinandro.
•Mahavoky ny akondro ka tsy ahiana loatra hitsakotsako
• Be vitamina B ny akondro, iny vitamina iny no mahamirana lalandava, tsy dia hampijaly loatra noho izany ny fanarahana ilay régime sady tsy dia miferin’aina koa.
• Azo atao solon’ny « céréales » ny akondro noho izy be fibres sy be vitamina.
• Azoazo ny vidiny
• Mitondra vitamina C sy potasioma ho an’ny vatana ny akondro.
Tsy dia ny akondro loatra no mampihena. Manampy ny vatana hahatazona tsy mihinana elaela izy. Mitazona ny otrikaina hijanona ao anaty koa rehefa misotro rano be. Misoroka ny fitia tsakotsako izy noho izany. Akondro vaovao hatrany no hohanina. Tsy misy otrikaina intsony ny akondro nandrahoina.
Tsy mety ho an’ny olona kely tahana « glycémie » ity régime ity.
Fantaro koa fa mety hampitohana ny fihinanana akondro 4 ka hatramin’ny 6 isan’andro. Tsy maintsy fehezina noho izany ny isan’ny akondro hohanina ao anatin’ny régime.